Ihhotela Patong Lodge Ihhotela (Thailand / Phuket obakhathalelayo.): Ifotho nokubuyekeza
Ezokuvakasha e Phuket usuthandwa esanda kutholakala - emihlanu emashumini eminyaka adlule. Kodwa ngalesi sikhathi kwanele ngempela ukwenza lesi siqhingi esimangalisayo tropical walithanda abagibeli abavela kulo lonke emhlabeni wonke. UHulumeni Thailand kwadingeka asebenze kanzima ukuze udale i ingqalasizinda ukuthi bazokwazi ukwanelisa izivakashi abanezidingo ezahlukene. Lesi siqhingi amabhishi eziningi coves, embozwe elinesihlabathi esimhlophe ngasemaphethelweni. Ayagezwa yi oluluhlaza amanzi oLwandle Andaman.
Amaholide e Phuket
Lesi siqhingi Thai akuyona kuphela enhle kakhulu, kodwa futhi engavamile. Phuket ngokuqinisekile kuwufanele ukuvakashelwa, ikakhulukazi labo abafuna ehlukahlukene iholidi lakho. Uma izivakashi ungathandi Bangkok ezinomsindo noma Pattaya, kungcono usheshe uye kulesi siqhingi. Iqiniso lokuthi Phuket - indawo ezehlukile, kufakazelwa imibono eminingi kwesokunxele labo kakade lapha.
Lesi siqhingi, okuthiwa iparele we Andaman coast, iyona enkulu kunazo zonke e-Thailand. Njengoba ixhunywe ezwekazini ngu edamini. Cishe ayisishiyagalombili amaphesenti Phuket - Emahlathini emvula, okuyinto lihambisana izimpophoma, kakhukhunathi emasimini, amabhishi amahle nolwandle oluluhlaza kuphela ukwenza lesi siqhingi indawo ekahle uphumule. Phuket amabhishi eziningana owaziwa. Phakathi kwabo kukhona odumile Laguna Beach, okuyinto ukuchitha abantu babo isikhathi-off okuvela emhlabeni wonke, futhi lapho aphambili emahhotela kanokusho eziningi lwamahhotela.
Enye lolwandle - Surin - walondoloza isimo bendabuko emzaneni Thai. Eminyakeni yamuva, kuba yizivakashi. ubuhle Pristine ka Kamala Beach mkhulu yobumfihlo futhi aziphumulele. On ke ukhululekile amathathu- futhi emine aphambili, lapho kukhona konke okudingayo ukuze uphumule. Kuleli kunogu futhi wonke Thailand ipaki Phuket FantaSea ezaziwayo.
Ubizwa, ngokuvumelana ukubuyekezwa, iyona amabhishi ophithizelayo kakhulu ePhuket Island. Kukhona amahhotela yonke ukunambitheka kanye isabelomali, kuhlanganise isivakashi izindlu, lokuzikhethela of izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza, massage eshintsha, ema-disco, njll nightlife siqhingi ilapha - .. On Bangla Road Street. Yingakho Patong ngisho ngokuthi "Pattaya kancane". Kulabo ngifuna ukuthula kanye nobumfihlo uphumule ekhoneni unspoilt, singafani lapha. Futhi nakuba amanani amasevisi nezokuzijabulisa Patong lingaphezulu kakhulu kunezinye lonke Phuket, Nokho, ukuthi lapha iza nebutho elikhulu zezivakashi.
Kukhethwa amahhotela omkhulu: kungcono aphambili kweqiniso "esigodlweni", nezindawo zokuhlala ezincane izivakashi isabelomali. AmaRashiya amaningi Ukhetha uhlale amahhotela Lihle isigaba 3 *, isibonelo, Patong Lodge Hotel.
Itholakala enyakatho Patong, kwi oluhlaza amagquma olunothile. Amakamelo ukunikela umbono omangalisayo Kalim - omunye Phuket lolwandle. Ihhotela Patong Lodge Ihhotela 3 * ophelele kulabo izivakashi abafuna bazithola esifubeni imvelo ezishisayo, akusiyo akude kakhulu impucuko. Nje drive iDemo iqala amatasatasa Bangla Road. Kunezinto eziningi zokuzijabulisa lapho ukuphila ngokoqobo amathumba.
Patong Lodge Ihhotela lusekelwe umugqa wokuqala, cishe ogwini. Ukuze Phuket engafinyelelwa e isigamu sehora, futhi sezindiza amakhilomitha amathathu akude, okuyinto a plus enkulu labo ababa nezingane ezincane. Shiya indiza eside futhi eside ukudluliswa uyahlukunyezwa izingane, kodwa labo abakhetha ke Patong Lodge Ihhotela 3 *, emva kwemizuzu engamashumi amane ibibhukelwe egumbini ehhotela.
Nokho, njengomuntu ehhotela ezintathu-star, linikeza amakhasimende ayo uhla enkulu ngokwanele amasevisi. It has a lift futhi ikamelo inkomfa, ubani kungathatha izingubo zakho kuya elondolo, zokuhlanza owomile. Ensimini ka Patong Lodge Ihhotela has yokupaka khulula, kwedeski hambo, eziqashisayo imoto, kuhlanganise amabhayisikili.
I reception akusho ukuvala naphakade. Ungakwazi ngokushesha amphuzise imibhalo bese okhiye egumbini, kungakhathaliseki sokufika isikhathi. Ngaphezu kwalokho, edilini lomshado ungasebenzisa ngefeksi noma ifothokhophi imibhalo. Kwabaningi ingenqophileko isevisi ezifana ephephile kwebhokisi.
Patong Lodge Ihhotela lakhiwa ngo-1989, futhi ngo-ukulungiswa ezinkulu 2014 enziwa lapha. Insimu kuyinto landscaped ngokugcwele. Ngaphansi kwemithetho ye ehhotela awavunyelwe ukuhlala nezilwane, kuhlanganise izinja mhlahlandlela. Hlola ngesikhathi kuhlelelwe amahora nane, bese uhlole - emini. Ngo Registry isisebenzi kuzosiza ukubiza itekisi noma ukuhlela ukudluliswa uma kunesidingo.
Ngezinye Patong Lodge Ihhotela has a izincomo ezimbalwa, kuhlanganise amakhasimende Bridal noma avamile. Lapho befika kule ndawo izivakashi uthole cocktail, amabhodlela amabili fizzy isiphuzo futhi elihle lezimbali orchid.
Patong Lodge Ihhotela 3 * (Phuket, Patong) itholakala ku endaweni inamagquma olunothile phakathi baka-Ashera entendeni. Kuyo ayikhulu namashumi amathathu amakamelo izigaba ezilandelayo: Standard, Superior, futhi Deluxe kanye Suites. Bonke elilungisiwe ngesitayela yendabuko Thai futhi kahle banikwa ukhuni amnyama. Phambi kwabo bonke amakamelo balcony, sihlukanisiwe amakamelo namafasitela amakhulu sinye ukusuka phansi kuya ophahleni. Uhlezi lapha, ungajabulela ubunjalo ezizungezile futhi ujabulele engadini ezishisayo.
Amakamelo nazo ifakwe iziteshi satellite ukusakaza, ephephile mahhala futhi mini-bar, eqondile Ukudayela yocingo kanye air conditioning.
Eliphezulu ukuthungwa ifenisha lokhuni ne ethambile bazisonga ngalezi izilenge obukhulu, ukudala induduzo. amakhethini Dark ukusiza eziqinile usuku lonke izingane ezincane, okuyinto enkulu ukuzumeka zihlabelela wezinyoni.
inhlanganisela Izindlu. Bakuhlonyiselwe elineshawa gumbi, a hairdryer nazo zonke zokugeza ebalulekile.
Izikhungo egumbini ehhotela ubusuku nemini. Kukhona futhi zokuhlala izivakashi ukubhema abasesimweni iphiko ehlukile.
Patong Lodge Ihhotela (Phuket) inikeza umqondo owodwa kuphela - "lezitsha sasekuseni". Izivakashi, ngaphandle main, Ocean yokudlela, nge ithala ukunikela imibono emangalisayo kwehlathi tropical ezungeze ehhotela. Lapha izivakashi zijabulela okumnandi cuisine Thai ngamazwe, futhi kusihlwa ungalalela ukuphila umculo.
futhi Amabha amabili kukhona esizeni - Coco Terrace, lapho neziphuzo ezibandayo zikhishwa usuku lonke, kanye Ungadla. ungakwazi oda ikamelo isevisi uma uthanda. Le sevisi itholakala ubusuku nemini.
Patong Lodge Ihhotela 3 * (Phuket) inemisebenzi siqu ebiyelwe off futhi evikelwe for ukubhukuda. Kusukela isakhiwo main ebhishi - ikhulu namashumi amamitha. Ngesikhathi reception uhlale mahhala lolwandle amathawula zikhishwa. Kuyarentisa izambulela futhi sun bed izivakashi ukukhokha owengeziwe okudingekayo.
Ukwahlulela ukubuyekezwa, ogwini loLwandle Andaman, kuhlanganise Patong Beach - indawo ekahle eyigeza izingane ezincane. Embozwe isihlabathi kanye emnyango mnene emanzini, okuyinto esilungele ukuphepha kwezingane.
Ingqalasizinda ehhotela izingane ezincane zinikezwa ichibi engajulile kanye ikamelo yezingane. Lapho isicelo, abazali nethuba uthole yakho Igumbi trundle embhedeni, kukhona inkonzo nokugada ngesicelo. Izingane yokudlela banikwa izihlalo okusezingeni eliphezulu lokondla lula.
Animation ehhotela lapho. Uma amagagasi olwandle, ungakwazi ukubhukuda echibini, etholakala endaweni. Lapho esebekwe ukuba abe azungeze imibhede. Ubani ongafaka ukudlala amabhiliyade, ukuqasha i eyengeziwe Imali amatafula.
Fans of yokuchitha isizungu asebenzayo bayojabulela ngokuvakashela yaseshashalazini, kanye ngokuvakashela izimpi okwakwenza abashayi-sibhakela Thai. Ngaphezu kwalokho, ehhovisi lokubhalisa, ungakwazi ukuqasha imoto, kuhlanganise isithuthuthu noma ibhayisikili wena ukubona zonke izinto. Lapha ungakwazi ukuthenga izinkambo izinsuku ezimbili olwandle uhambo esiqhingini Phi Phi Don, umbukiso Siam Niramit, e Khao Lak, nokunye. D. Ngesikhathi sebehlezi ogwini kumnandi, ikakhulu amanzi. Qasha imishini diving, abaningi nothisha abanolwazi, scuba diving, ngebhayisikili noma isikebhe, nokunye .. izivakashi abaningi kugujwa osemcimbini lokuzalwa, ukuthola ukuncoma kusukela ehhotela of Patong Lodge Ihhotela 3 *.
Abaningi izakhamuzi zethu nabo bakholelwa ukuthi isigaba "izinkanyezi ezintathu" Patong yabagibeli ezinhle kakhulu. Akenzi sengathi ezingeni eliphakeme, elihambela- isethi.
Lesi sivumelwano Kwenziwa fast ngokwanele: ngaphandle kokulinda ukuba limenyezelwe imithetho yesikhathi, ebhukwini umsebenzi phezu ukutholakala ngokushesha banikezwe okhiye kusiza ukuletha izinto. Abasebenzi azikhulumi Thai kuphela, kodwa futhi ngesiNgisi, ngakho-ke, njengoba umthetho, amaRashiya unezinkinga zokuxhumana kuphakama.
Izimo zethu zihluke kakhulu amagama ambalwa ezinhle ukusho mayelana ikamelo, alinikela yokuhlala ehhotela Patong Lodge Ihhotela 3 *. Izibuyekezo abonisa ukuthi basuke kabusha kahle, amapayipi lusebenza kahle, kukhona ephephile khulula, i-TV ne-USB e.
Kepha ukudla, kulinganiselwa ngu bakithi ku amaphuzu aphezulu. Nokho, abanye babecabanga ukuthi sasekuseni kwakungafanele zahlukahlukene kakhulu, nakuba iningi izivakashi basutha nge imenyu walibiza ukudla okuphelele.
Kunezindlela amazwana engemihle mayelana nendawo yehhotela. Angiyithandile izivakashi kanye nokuntuleka nezitolo ezinkulu nezindawo zokudlela ezishibhile eseduze.
Muong Thanh Nha Trang Centre Ihhotela, Nha Trang, incazelo Vietnam Ihhotela, ukubuyekezwa
Ihhotela Pavlina Beach Ihhotela 4 * (Niforeika, Greece): Uhlolojikelele, amakamelo kanye nokubuyekeza
Dying (recumbent) nesineke: izimpawu ngaphambi kokufa
Thobekile izimbali magic: mignonette
Indlela yokuthumela qhuba nge-imeyili? Imithetho yokuziphatha yebhizinisi